Kuyini Extravaganza? Lona magic wangempela!
"! Faerie" - igama esiphawulekayo kusukela movie "! Ungabi" Ngokushesha efika engqondweni yakho uma kuphakama umbuzo: "Kuyini a inganekwane?" Lo Heroine-movie ngegama elilodwa imizwa yami itshali esikhulu eliqhakazile umphetho, okuyinto zihambisana nomkhwenyana wakhe. Headscarf kuyaxaka, kodwa amehlo futhi ubuso Heroine uzwakalise ukujabula kuphelile. Kusobala ukuthi izwi ngokushesha ninamathele, bese esetshenziswa yokuveza imizwelo ezicacile, futhi ngaso sonke isikhathi esihle.
Kuyini Extravaganza? Kuyinto kuba nomkhosi omkhulu! iholide Bright, ngakho kukhona uqinisekile nomlilo. izimbaqa Raging luvutha ne izinhlangothi ezimbili ezinde amatshe ithrekhi. Le ndlela kuholela ngqo ichibi. Ebusweni black ichibi kukhanya, khomba kulawo manzi siyafiliza izibani of izimbaqa. Kancane cool, noma simane nje Ukugodola ngoba ubumnyama sikhula emhlabeni? Kodwa lokho elaliphuma phakathi kobumnyama iza ehlotshiswe kudabuke and balloons isikebhe ke ezimbili, ezintathu ... Ngamunye wabo - a footman nge ithoshi ngesandla sakhe. Okukhanyayo begqoke isixuku izivakashi ukuthatha ezihlalweni zabo, kanye ticondze amaslayidi phezu sesibuko lwechibi. Kusukela endaweni ethile kwafika umculo amahle ka zomculo ezinezintambo. Izikebhe ayeke phakathi echibini futhi zilimaze okwesikhashana. A bani ukukhanya, futhi nobumnyama ibonakala ngokukhazimulayo ovuthayo lwasemaphusheni castle, kusukela lapho izikebhe ifinyelela indlela ukukhanya. I umculo udlala kakhulu, iziqhumane ziqhuma futhi ishabalale e injabulo njengoba isikebhe buthule ugcine indlela yabo ukuba enqabeni Prince Sheremetyev.
Lezi kuhanjiswa enchanting sihlangabezane izivakashi bamangala e Manor Sheremetev Kuskovo eduze eMoscow. Ngezinye Prince kwaba yemidlalo, futhi lapho izivakashi wagibela eya enqabeni inqaba nabalingisi abadlali baqala ukudlala phandle izigcawu, nakuba umbono omkhulu owayezofika esiteji main engadini. Yilokho umbukwane!
nezinye uthuli eziningana imizwelo idlulisa zomkhosi wokuvelela kakhulu futhi ezinkulu emhlabeni, okuyinto ngokuvamile agcinwe kule Brazilian Rio de Janeiro. Isenzo evakashela ezingaphezu kuka-6 million. Abantu, kanye nobusuku obungamashumi ambalwa ilandelana akusho ukubohla injabulo engalawuliwe.
Kuyini Extravaganza? Lena emehlweni emnandi. Ngokwesibonelo, inganekwane nemithombo Gorky Ipaki e Moscow, iqala ngokushesha at 6:00 pm. Okwesikhashana eyeka emthonjeni emaphakathi, ihubo umsindo jet ongaphakeme lamanzi kancane ukubuyela ezihlalweni zabo. Kodwa ukudansa, waltz ngu Strauss umculo, Vivaldi, Tchaikovsky, wamshaya emhlabeni Splashes ukukhanya nenjabulo. Uma libalele uthingo lebhokisi ahlukene izingoma imithombo. Umculo umsindo namandla futhi licace, ngaphezulu vzmetayutsya jet imithombo, nakuba ezihlangene ibe intambo eyodwa umculo, umsindo kuzithinta okokugcina, futhi esingu phezulu ngesikhathi sokugcina ngaphezu kwezihlahla, amanzi, izinsika sidilike ku amaconsi eziningi, amaparele, ngasinye ucezu kwemizwa iholide.
Wedding - iholidi emangalisayo, ogxile uthando nenjabulo. Le iholidi eRussia banquma ukugubha inqwaba izivakashi kanye nezipho, futhi kungenzeka kungahlali izipho, kodwa ukulwa kuyadingeka. Nokho, amaqhawe ukulungiselela isikhathi umcimbi obalulekile ukhunjulwa ungcono emcimbini uqobo, futhi eyandayo abasha bavame ukuzigwema mass ukuphuza amaqembu ngaphezu udela zezimali ngenxa wonke wazi ukuthi ama-Israyeli angena esivumelwaneni isimo. Kodwa abazali ubambe isiko elingcwele ngokungagwegwesi ekucasulayo izingane, uma bethi leli holidi izobalwa kuphela izihlobo eziseduze nabangane beqiniso ukuthi umakoti nomkhwenyana kuyakuza jeans, nabo bonke imali eqoqwe abasichitha bebuka evakashele eYurophu noma iholide at iChibi iBaikal .
Extravaganza - kungcono magic
Leli gama lisuselwa inganekwane French "Fairy» (feerie ngokumelene imali) - oyisangoma. Ngakho-ke kunengqondo ukuphetha ngokuthi umbukwane - kungcono magic noma umlingo, ayiziphihli indaba mbukwane, okubangela imizwa acacile abahlanganyeli kanye ezibukelini.
Vasilina Mihaylovskaya - empilweni nasemsebenzini.